ဓာတ်သေပညာကျမ်း (အပိုင်း-၅) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဓာတ်သေပညာကျမ်း (အပိုင်း-၅)
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Jun 13, 2013 in Photography | 18 comments
ဓာတ်သေပညာရပ်အတွက် အရေးကြီးဆုံးထဲက တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ အပါချာ အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်။ တံခါးပေါက် နဲ့ဥပမာ ပေးချင် ပါတယ်။ အပါချာ ဆိုတာကလဲ လန်းစ် ကနေ၀င်လာတဲ့ အလင်း ကို ကင်မလာထဲ ၀င်ဖို့ အတွက် ထားတဲ့ အလင်းတံခါး ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။
အပါချာကို (f) ဆိုတဲ့ သင်္ကတ နဲ့ေ ဖ်ာပြကြပီးfနံပါတ်နဲ့ အပေါက်အကျဉ်းအကျယ်ဟာ ပြောင်းပြန် အချိုးကျပါတယ်. F နံပါတ်သေးရင် အပေါက် ကျယ်ပြီး F နံပါတ် ကြီးရင် အပေါက် ကျဉ်း သွားပါမယ်။။ အပါချာ နံပါတ်တွေဟာ အငယ်ဆုံး f1.4 ကနေစပြီး f22 အထိရှိပါတယ်
ဒီလန်းစ်မှာဆိုရင် 2.8 ဆိုတာ အပါချာနံပါတ် ကိုပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ်
အပါချာကတော့ လန်းစ်တွေမှာ အဓိကျ တဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ပြီး လန်းစ်တွေရဲ့ တန်းဖိုးဟာ အဲဒီ အပါချာ အကျဉ်း အကျယ် ကြောင့် ကွာဟသွားပါသတဲ့.. ဥပမာ သာမန် tele lens အပါချာ 4.5 ဟာ ၅ သိန်းလောက်ပဲ ရှိပြီးတော့ 2.8 ဖြစ်သွားတဲ့ tele lens တွေကတော့ ၁၈ သိန်းလောက် ရှိပါသတဲ့။
အပါချာ အကျဉ်း/အကျယ်ဟာ ဖြစ်ရပ် ၂ ခုကို ဖြစ်စေပါတယ် အဲဒါကတော့ အိတ်စပိုရှာ နဲ့ DOF ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် အပါချာ ဟာမသိ မဖြစ် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အပါချာကြောင့် အိတ်စပိုရှာ အနည်းအများ ဖြစ်စေပါတယ်. အပါချာ ကို ကျဉ်းကျဉ်း ဖွင့်ထားရင် အလင်းရောင် နဲနဲ ပဲ ၀င်ပြီး ကျယ်ကျယ် ဖွင့်ထားရင် အလင်းရောင် များများဝင်မယ်..
ဒီပုံမှာ f/1.4 ဟာ အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး အကျယ်ဆုံးဖြစ်တာ တွေ့ရပါမယ်..အကျယ်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ အတွက် အိတ်စပိုရှာ များပြီး ဘန်းသွားတာ ကိုတွေ့ရမှာပါ.. ပုံက ဖြူဖွေးသွားတာကို ဘန်းတယ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်.. တစ်ခါတလေ အိမ်ထဲ ဒါမှမဟုတ် အလင်းရောင်နဲတဲ့ အခန်းထဲမှာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်နေကြရာက ရုတ်တရက် အပြင်ကို ထွက်ရိုက်လိုက်တဲ့ အခါ ဒီလိုမျိုး ဘန်း သွားတာ တွေ တွေ့ဖူးမှာ ပါ. အဲဒါက ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အလင်းရောင်နည်းတဲ့ နေရာမှာ ရိုက်နေတဲ့ အခါ ကင်မလာ က အလင်းရောင် နည်း နေမှန်း သိတဲ့အတွက် ISO တွေ.. အပါချာတွေကို ဖွင့်ပေးထားတယ်.. ရုတ်တရက် အပြင် အလင်းရောင် ရတဲ့နေရာကို ရုတ်တရက် ရိုက်လိုက်တဲ့ အခါ ကင်မလာက ပြန်ပြီး မချိန်ရသေးတဲ့ အတွက် ဖွင့်ထားတဲ့ အပါချာနဲ့ပဲ ဆော်လိုက်တဲ့ အခါ ပုံက ဖွေးသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီလိုပါပဲ အပြင် အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရနေတဲ့ နေရာမှာ ရိုက်နေရာက ရုတ်တရက် အမှောင်ထဲကို ရိုက်လိုက်တဲ့ အခါ ပိုပြီးမှောင်မည်း ပြီး ဘာမှ ကို မမြင်ရလောက်အောင် ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်. ဒါကြောင့် ရုတ်တရက် အလင်းထဲကနေအမှောင်၊ အမှောင် ကနေ အလင်း ချက်ချင်းပြောင်းတဲ့အခါ ချက်ချင်းမရိုက်သေးဘဲ ကင်မလာကို အရင်တွက်ခိုင်းပြီးမှ ရိုက်ကြပါလို့ အကြံပြုလိုပါတယ်. အဲ ကင်မလာ ကိုဘယ်လိုတွက်ခိုင်းမလဲ ဆိုတာကတော့ ရိုက်မဲ့နေရာကို ကင်မလာ ကိုချိန်ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။။ ပိုသေချာချင်ရင် release button လေးကို half press လေးနှိပ်ပြီး အိတ်စပိုရှာ တိုင်းလိုက်ရင်ရပါပြီ. ဒါဆို ကင်မလာက အပါချာ ဘယ်လောက် ရှက်တာစပိ ဘယ်လောက်ထားရမလဲ ဆိုတာ တွက်ချက်သွားနိုင်ပါဂျောင်း
ဖက်ပြီးသွားရင်နော် သိတယ်နော် ဟွန်းဟွန်း
ကျုပ်ပေ့က https://www.facebook.com/gandaryiphotos နော်
အဲ့ပေ့ခ်ျ က ဘာလုပ်ရမှာလဲ ဟင်
လိုက်ခ် လုပ် ပေး ရ မှာ လား လို့ 
Like, comment and share for me
thanks U PAY
ဖေ့ဘုတ်ကို ရှယ်လိုက်ပြီ တီချယ်အုပ်။
ဟိုမှာလဲ လိုက် ခဲ့ ပါတယ်
ဆြာအုပ်ပ်ို့စ်က ၂၆ ပါရှင်။ page မှာလည်းလိုက်ပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပို့ပါသည်။ Lens ကပိုပြီးဈေးကြီးမယ်ထင်တယ်။ မျှားအဆုံးမလိုက်ပဲပြန်ကွေ့ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။
အိုက်ဒါ အပါချာ ကိုး
မှတ်သား သွားကာ ဆရာဖြစ်ဖို့ တစ်ဆင့် တိုးသွားကြောင်း သတင်းပို့ပါသဗျ
၂ထပ်ရှိမှ မှတ်မိတယ်ဆိုလို့ ဟိုဖက်သင်တန်းကိုလည်း လိုက်တက်ပါမည့်အကြောင်းးးးးးးး :harr:
အန်တီမမ ကို ကျောပဘူးဂျာ.. အန်တီမမ အမြဲလုပ်နေတာတိပါတယ် ဟဲဟဲ ကျန်တဲ့သူတွေ ကို ကျောတာ
ခုတလော ဖေ့စဖုတ်မယ် မီးသိုင်းကတဲ့ဆြာတွေ တအားများလာတာရယ်
ကျော်လား မီးသိုင်းတော့-ကျော်မက-ဘာဘု။ ကိုယီးကျော်ပဲ ကဘာဒယ်။
မီးပန်းမီးပွားတွေ နဲ့ ကြောက်စာယီးရယ် ကွကိုယ် သတ္တိမစိလို့ ကန္နားစီးနေတာ ..
သတ္တိစိရင် အဟွာပြောင်းစီး မှာပေါ့။
မလုပ်ရဲပါဘူးဂျာ မီးသိုင်းကမိလို့ ရပ်ကွက်ရုံးက လာခေါ်နေဦးမယ် စတားထရေးလေး၊ လောင်းအိတ်စပိုရှာလေး တောင် မစမ်းရသေးဘူး ဒီတစ်ခေါက် ပုဂံသွားရင် စတားထရေး စမ်းလိုက်ဦးမယ် မော်ဒယ်လာထိုင်ပေးမဲ့သူရှိရင်ကောင်းမယ် ဟိ. စတားထရေးကို မော်ဒယ်နဲ့ ရိုက်တာမတွေ့ဖူးလို့ ရိုက်ကျိမလားလို့ ဟီး
Like, comment and share for me အလုံးစုံပြီးမြောက်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း
facebook တွင် လိုက်၊ ရှဲ၊ မန့်ပေးကြသူ အားလုံးကို ရှဲရှဲ
ခရစ်ဒစ် နဲ့ အအောင်ပေးမယ်ဗိျု့
f ဂဏန်းသေးလျှင် ကျယ်ပြီး
f ဂဏန်းကြီးလျှင် ကျဉ်းကြောင်း..
ကျဉ်းလျှင် ဈေးပေါပြီး ကျယ်ပါက ဈေးကြီးကြောင်း..(Tele lensများ) ဟု
ဟို လက်ချာ ၄ကြီးက စတစ်ကြီး မပြုတ်သေးတော့ကျုပ်ရှာရတာပေါ့
ကျဉ်းရင် နည်းနည်းပဲ ဝင်ဒယ် ..
ကျယ်ရင် များများ ဝင်ဒယ် …
သင်ဒန်း တက်သွားဒယ်နော် ….